IPhone Iindawo ezinqamlezileyo | IPhone iindaba
Iifowuni zePhone Zininzi kwintengiso, nangona kuphela ezona zihambele phambili zihlala zinandipha ezona zicelo zinamandla okanye izinto zamva nje ezifakwe kwi-iOS, inkqubo yayo yokusebenza. Ukusukela ngo-2007, izizukulwana ezininzi zefowuni ye-Apple ziphumile: NGAPHAMBILI, 3G, 3GS, 4, 4S Kwaye, imodeli yamva nje eza kuvela, ifayile ye- iPhone 5 Inika umzimba wealuminium unibody kunye nescreen esine-intshi, egqitha okokuqala ngqa ii-intshi ezi-3,5 eziqhelekileyo esasizibonile kwada kwangoko.
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iveki e-1 .
Amahemuhemu malunga noyilo olutsha lwe-iPhone 14 lulandelelwano lwemihla. I-tonic yinto ...
I-iPhone 14 isemilebeni yomntu wonke kwezi veki zidlulileyo. Uyilo lwayo olutsha olunokubakho ngaphambili kunye nezinto ezintsha…
I-iPhone 14 iza kuzisa uphuculo olubalulekileyo kwikhamera yangaphambili ngokutsho kukaKuo
Amahemuhemu malunga nokuphuculwa kwekhamera eza kuziswa yi-iPhone 14 ebesoloko engatshintshi kwiinyanga zamva nje…
Imifanekiso yokuqala yoyilo lwe-iPhone 14 elandelayo iyahluzwa
Amahemuhemu aqala ukufumana amandla kunye nokukhukula kwinethiwekhi yoluntu kwiintsuku zamva nje. Kwelinye icala, sine…
I-iPhone 14: Amahemuhemu amatsha alatha ekuncitshisweni kwezakhelo.
Ngokwamahemuhemu amatsha asekwe kunikezelo lwe-AutoCAD olunokuthi luvuzwe, i-iPhone 14, kwimodeli yayo yePro Max ...
Ii-iPhones ezine-ID ye-ID phantsi kwesikrini ziya kulibaziseka iminyaka emininzi
I-iPhone 14 iya kubona ukukhanya ngoSeptemba ozayo. Nangona kusekho iinyanga ezininzi ezizayo, amahemuhemu…
I-iPhone 14 ingena kwisigaba sokuqinisekisa ubunjineli, ikhamera yeperiscope ilibaziseke kwi-iPhone 15
por UKarim Hmeidan yenzayo Iinyanga ze2 .
Sisekwikota yokuqala ka-2022 kodwa sele uyazi ukuba ixesha lamahemuhemu okuba…
Iikhamera ze-iPhone 14 Pro ziya kuba ngqindilili xa kusetyenziswa iimegapixel ezingama-48
Kubonakala ngathi ukufika kweemegapixel ezingama-48 kwiimodeli ezintsha ze-iPhone 14 Pro kuya kongeza ubukhulu ...
Iiplani ze-iPhone 14 Pro zibonisa ukuba iyajiya
por UToni Cortés yenzayo Iinyanga ze2 .
Izicwangciso ezityholwayo ngemilinganiselo yangaphandle ye-iPhone 14 Pro zisandula ukuvuza. Ukuba le mizobo iyinyani,…
Isizukulwana sesithathu se-iPhone SE sifika nebhetri enkulu kunye nemodem entsha
Uninzi luyayigxeka kodwa inabalandeli bayo, isizukulwana sesithathu i-iPhone SE yafika nge-8 kaMatshi nge…
Uqhagamshelo lwe-5G lophula iirekhodi ngenxa ye-iPhone 13
Ngokuqinisekileyo ucinga ukuba i-iPhone yayiyeyokugqibela ukuphumeza itekhnoloji ye-5G kwizixhobo zayo kunye…
Uyibona njani ipesenti yebhetri kwi-iPhone X
IPhone ngaphandle kwenkonzo? Zama ezi zisombululo
Umahluko phakathi kwe-iPhone 5 kunye ne-iPhone SE
Indlela yokusika ikhadi leSIM ukujika libe yiSIM encinci okanye i-nano SIM